pyiphyohun's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (1)DiscussionsEventsGroups pyiphyohun's Likes Gifts Received
pyiphyohun has not received any gifts yet
7magic commented on pyiphyohun's blog post မြန်မာပြည်ADSL လိုင်း"ဆက်သွယ်ရေးကနဲ့ အသက်ဆိုင်ဆုံးပါ သူ့တို့ စက်ခန်းက ပြသနာပါ ကျွန်တော် ကြုံဖုးပါတယ် အကုန်ကောင်းတယ် ဆက်သွယ်ရေးက MPT လူကြီးကို ခေါ်ပြောတယ် သူအိမ်ကို ခဏလိုက်ကြည့်တယ် ပြီးတော့ ရုံးပြန်သွားပြီး ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာ ရသွားပါတယ် နောက်တစ်ခုက အကျွေးကျန်ရင်လည်း…"Jun 15, 2012komoemoe commented on pyiphyohun's blog post မြန်မာပြည်ADSL လိုင်း"အရင်ဆုံး telephone လိုင်းမင်းကို သဘောပေါက်အောင်ပြောပြီး အနီးဆုံး ပွိုင့် Cabinet အထိ ဖုန်းကြိုးတိုက်ရိုက်ဆွဲမှရပါမယ်။လိပ်စာနဲ့ အိတ်ချိန်း အမှန်ဖြစ်ရပါမယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်က ဖုန်းကို
လှိုင်မြို့နယ်မှာ လာချိတ်ထားရင်တော့ အိတ်ချိန်းနဲ့ …"May 13, 2012minmyatkha commented on pyiphyohun's blog post မြန်မာပြည်ADSL လိုင်း"modem အသစ်ဝယ်သင့်တယ် ဈေးပေါပါတယ် ၃၅၀၀၀ လောက်ပဲရှိတယ် DHCP setting တော့ပြင်ရမယ် နားလည်တဲ့သူ ပြင်ခိုင်းသင့်တယ်"May 8, 2012telecomwiz commented on pyiphyohun's blog post မြန်မာပြည်ADSL လိုင်း"because of telecom exchange.we can't do anything.Just Pray......"May 6, 2012John Moe commented on pyiphyohun's blog post မြန်မာပြည်ADSL လိုင်း"We need more info to troubleshoot..
>> DSL မီးက ခဏခဏ မီးမလင်းဘူးဖြစ်နေတယ်
What is model of DSL Modem?
DSL Light should be stable.
>> ရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီလုပ်ခိုင်းတော့လည်း ခဏ ပဲရတယ်
Did they told you what they…"Apr 25, 2012pyiphyohun postedablog postမြန်မာပြည်ADSL လိုင်းအကိုတို့ ရေ မေးစရာလေးရှိလို့ ပါ ADSL 512 လိုင်းယူထားတာ လိုင်းကတက်လာရင်တော့ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့DSL မီးက ခဏခဏ မီးမလင်းဘူးဖြစ်နေတယ်လေ ရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီလုပ်ခိုင်းတော့ လည်း ခဏ ပဲရတယ်လေ ဗူးပိတ်ပြီပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် မီးကမလင်းတော့ ပြန်ဘူးလေ အဲ့ ဒါဘယ်လို့ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်လဲ ဖုန်းကြိုးက လည်း အား လုံးအသစ်လဲထားတာလေ ဗူးကလဲအကောင်းပါပဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြုံဖူးရင်ပြောကြပါဦး ...See MoreApr 25, 2012 5
pyiphyohun postedastatus"အကို တို့ ရေ မေးစရာလေးရှိလို့ ပါ gtalk က နေ ဖုန်း ခေါ် တာလေ လိုင်း က တစ်တုံးမှ မတက် ဘူး အကို အဲ့ ဒါဘာလို့ လဲအကိုလိုင်းက 512ကိုတစ်လုံးတည်း"Apr 21, 2012 0
pyiphyohun updated their profile photoApr 19, 2012pyiphyohun postedastatus"အကို တိုရေ မေရဦးမယ် ကျနော် လင်းနစ်ဆာဗာ သင်တန်းတက်ချင်လို့ လေ ဘယ်လို့လုပ်ရမလဲ ပြောပါဦး..."Apr 19, 2012 1
pyiphyohun is nowamember of MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT ProfessionalsMar 16, 2012 Welcome Them! RSS
Posted on April 24, 2012 at 9:15pm5Comments
အကိုတို့ ရေ မေးစရာလေးရှိလို့ ပါ ADSL 512 လိုင်းယူထားတာ လိုင်းကတက်လာရင်တော့ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့DSL မီးက ခဏခဏ မီးမလင်းဘူးဖြစ်နေတယ်လေ ရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီလုပ်ခိုင်းတော့ လည်း ခဏ ပဲရတယ်လေ ဗူးပိတ်ပြီပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် မီးကမလင်းတော့ ပြန်ဘူးလေ အဲ့ ဒါဘယ်လို့ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်လဲ ဖုန်းကြိုးက လည်း အား လုံးအသစ်လဲထားတာလေ ဗူးကလဲအကောင်းပါပဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြုံဖူးရင်ပြောကြပါဦး ... AddaBlog Post